Inhlangano yabafelokazi izosiza abanye abakulesi simo | IOL Isolezwe
Inhlangano yabafelokazi izosiza abanye abakulesi simo
Isolezwe / 19 July 2012, 12:00pm /
UNKK Gumede Isithombe:GUGU MQADI
BAZIMISELE ngokusiza omama abashonelwe ngabayeni ukuze bakwazi ukuzimela nokumelana nezimo.
Ngenxa yezimo ababhekana nazo uma sekushone abayeni babo, omama abaningi bagcina bedidekile futhi bengenabo abantu abazobaseka.
UNkk Joyce Gumede wenhlangano yomama, iSiyagcinwa Widows Forum uzimisele ngokuba yisisombululo enkingeni yalaba besifazane.
UNkk Gumede unolwazi olwanele ngokwenzeka uma kuhambe umyeni ngoba naye wake waba kulesi simo eminyakeni eminingi edlule.
Umyeni wakhe owayengusomabhizinisi wadutshulwa emsebenzini ngamadoda angaziwa.
“Ukushona komyeni wami kwavula isilonda esikhulu enhliziyweni kwangenza nganovalo lokuthi akukho engiyokwazi ukukwenza. Phezu kwakho konke lokhu kwakunabantu ababengisola ngokumbulala umyeni wami,” kusho uNkk Gumede.
Uthe abaningi babengameseki, babembona engumuntu omubi. Phezu kwalokhu kwakufanele aqhubeke nokukhulisa izingane zabo abhekelele umndeni wabo.
Yize ayenelakhe ibhizinisi uthe imali kwakungeyona yodwa into ayeyidinga kepha wayedinga umuntu ozomsiza lapho ekhulisa izingane amuphe namacebo okwenza impilo iphindele esimweni esihle ekhaya emuva kokushiywa umyeni wakhe.
Ukubona isimo adlule kuso kumenze wabona ukuthi akuyena yedwa obhekane nezinkinga emuva kokushonelwa ngumyeni kepha lokhu kuyinsakavukela kwabesifazane abaningi.
Yingakho aqala inhlangano wase emema nabanye abesifazane asebeke badlula lapho edlule khona ukuthi babe yingxenye yomkhankaso wokuvuselela amathemba kwabanye. Uthe yize kunguye owaqhamuka nomcabango wokuyiqala le nhlangano usebenzisana nabanye omama.
Le nhlangano ngeke igcine ngokubheka izinkinga zokukhulisa izingane kepha bazobheka nezindlela zokuthuthukisa labo mama.
“Sifuna ukuqala amakilasi okufundisa ngamakhono ahlukene. Kuthina kunomama abakwazi ukwakha izigqoko nabakwazi ukubhaka nokwenza eminye imisebenzi engadluliselwa kwabanye,” kusho uNkk Gumede.
NgoMgqibelo kule mpelasonto bazothula le nhlangano ngokusemthethweni ehholo lomphakathi kwa-V eMlazi.